Kedu ihe bụ sleet na olee otu esi akpụ ya? Netwọk Mgbasa Ozi
Dabere na ọnọdụ ikuku dị n'oge niile, anyị enweghị ike ịchọta ụdị mmiri ozuzo oge niile. Nke ahụ bụ, ọ nwere ike ọ bụghị mgbe niile mmiri ozuzo, snow ma ọ bụ Glasgow, ma e nwekwara sleet. Obu ihe ekere eke nke odidi miri ozuzo na ma nieve. Ka ihe a wee mee, a ga-enwerịrị ụfọdụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi na ikuku. Tụkwasị na nke a, ụdị ọdịdị ihu igwe na-emekwa ka nhụsianya dị ka sleet.
Anyị ga-eme ka ihe a niile dokwuo anya banyere ikuku mmiri na siliiti na nke a.
1 Kedu ihe bụ sleet na mgbe ọ na-eme?
2 Njirimara otu ebe
3 Kedu ihe dị larịị
Kedu ihe bụ sleet na mgbe ọ na-eme?
O nwere oge mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị iche. Dị ka anyị si mara, mgbanwe ihu igwe dị iche iche bụ ndị na-achịkwa ọnọdụ gburugburu ebe obibi oge niile. Dabere na ụkpụrụ nke ikuku ikuku, okpomọkụ, ọchịchị ikuku, ígwé ojii, iru mmiri, wdg. Enwere ike inwe ụdị mmiri ozuzo ma ọ bụ ọzọ. Ihe kachasị eme bụ na ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị karịa ogo 0 na iru mmiri dị elu, ọdịda na-adị n'ụdị mmiri ozuzo.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa 0 ogo ma ọ bụ na anyị nọ n'ebe dị elu, ebe nrụgide dị ala, ọ na-adịkarị ma ọ bụ nwee ike ịbụ na ọdịda na-adị n'ụdị snow. Agbanyeghị, ọnọdụ ndị a metụtara gburugburu ebe obibi ekwesighi ịbụ "nna anyị" gbasara ihu igwe, mana enwere ndị ọzọ dị ka ikuku.
Sleet bụ ụdị mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo na snow na-eme n'otu oge. Akụkụ nke ọdịda oyi kpọnwụrụ na ụdị ndị ọzọ bụ ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ obere kristal ice. N'ihi na mmiri snow na-emepụta e nwere ga-abụ ụfọdụ kpọmkwem ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Ma ọ bụ na ha na-eme naanị mgbe ikuku dị ọkụ iji bido gbazee snow, mana na-agbazeghị ya kpamkpam. Typedị ikuku a dabere na ịdị elu, iru mmiri na ọchịchị ikuku. Sleet enweghị ike ịme mgbe niile ọbụlagodi na ikuku ikuku dị mma nke mere na mmiri ahụ na-amalite ịgbaze mana ọ gbazee kpamkpam.
Kristal kristal a na-akpọ flakes bụ hexagonal n'ụdị mgbe a na-ele ya anya nke ọma.
Njirimara otu ebe
Sleet anaghị adịkarị ike n'ala ma ọ na-adị ka ọ na-esi n'ígwé ojii agbadata. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na okpomọkụ dị elu dị n'okpuru ogo ogo, flake n'onwe ya nwere ike isi ike ma mepụta kristal ice ozugbo ọ dara n'elu. N'akụkụ aka nke ọzọ, na kefriza nke ndị a flakes na ala nwere ike na-etolite ihe anyị maara dị ka Ibé akwụkwọ nke ice ma ọ bụ ntu oyi.
Maka ụfọdụ ndị na-ahụ maka ihu igwe, ịdị warara bụ ụdị ọdịda mmiri na-eme ka mmiri kpọnwụrụ kpamkpam, mana ọ gaghị adị ka kristal. Nke ahụ bụ, ịchọghị usoro nkịtị nke ụdị hexagonal n'ụdị ọdịda a.
Akpụrụ dị n’ime ụdị mmiri ozuzo a ọ dị ezigbo mma ma ọ naghị emepụta ụdị ụlọ ahụ dị mgbagwoju anya. Ọdịdị a magburu onwe ya na-adị mgbe okpomọkụ dị ọkụ iji gbazee snowflake, mana na-agbanyeghị na mmiri. N'ihi nke a, n'oge mmiri ọkụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ mmiri nke fọrọ nke nta ka ọ gbazee n'ụdị ice na-enweghị ịghọ kristal na ụfọdụ snowflakes na, ebe ọ bụ na ha buru ibu, agbachaghị n'oge ma jigide isi ihe ha.
Ma eleghị anya, na anya ọ dị ka ụdị snow nkịtị, ma mgbe ejiri nlezianya lelee ya ma ọ bụ n'okpuru microscope, enwere ike ịhụ na mkpụrụ ọka yiri nke nke akụ mmiri igwe na-akpụ kama kristal ice zuru oke nke nwere usoro hexagonal. Na nke a ha bụ obere amorphous ice.
Ihe dị iche n'etiti ọdịda ndị a bụ ọkachasị na mejupụtara. Mmiri mmiri mmiri bụ mmiri mmiri na ihe mejupụtara, akụ mmiri mmiri nwere mmiri na steeti siri ike, mmiri snow na-eji ice amorphous na snowflakes egwu egwu.
Kedu ihe dị larịị
Enwere ike inye mmiri snow n'ọnọdụ dị iche iche. O nwere ike ịbụ na ndị ọzọ na-agbanwe ọnọdụ ihu igwe dị ka iru mmiri, nrụgide nke ikuku ma, ya mere, ọchịchị ikuku na-akpata ụfụ mmiri nke nwere ike ịbụ onye dị jụụ iji gbanwee ikuku. Sleet bụ ihe ọ bụla karịa oké mmiri ozuzo.
Ọ bụ ihe okike nke anyị nwere ike ịhụ oke ifufe nke mmiri na snow nke dị mma nke ọma na akụkụ ma na-agbasasị ike na n 'anya dị anya site na ikuku Ka mmiri wee nwee ike ịdị, iru mmiri ahụ kwesịrị ịdị ihe dị ka 100% na ikuku kwesịrị ịdị n'okpuru ogo ogo. N'okwu a, ihe na-eme ka snowflakes gbazee n'ime ice na-amorphous bụ ikuku na ọdịda nke nrụgide nke ikuku. Ọtụtụ mgbe, ihe onu a putara na squall.
Ọ na-apụtakarị na mpaghara ugwu dị elu, ebe ikuku ikuku dị ala dịka ọ dị elu na iru mmiri nwere ike idowe elu n'ihi njupụta nke osisi. Ọ dabere na ahịhịa na ụdị ya. Ọ bụrụ na njupụta ahụ bụ shrubby ọ gaghị enwe ike ijigide iru mmiri dị ka elu. Maka ụkpụrụ iru mmiri ndị a ga-eme, achọrọ iru mmiri dị elu karị, ọkachasị nke akụkụ osisi nwere oke ịdị oke na ịdị elu guzobere.
Na mgbakwunye nke iru mmiri, oké ifufe na nsogbu dị ala na elu, a ga-enwe ifufe dị ike iji mee ka oké mmiri ozuzo na-ada ada mgbe amorphous ice flakes na-agbaze. Ihe omume a na - ewere ọnọdụ n’oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri na udu mmiri. Ọ na-akawanye oge opupu ihe ubi mgbe enwere ntu oyi kpọmkwem na njupụta oke ọhịa dị elu n'ihi okooko na oge mmepe ọtụtụ osisi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na okike ọ nweghị ihe ọhụụ akachasị ma guzosie ike site na njirimara pụrụ iche. Anyị bụ ndị na-ekewa ihe ịtụnanya ahụ iji ghọta ha nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Legbọ mmiri